Full Nduzi na Mirroring Your Android Gị PC / Mac | Mirror Android
1. Gịnị mere na ndị mmadụ chọrọ mirror ha Android ka PC?
2. Ụzọ nke ị nwere ike Mirror Android ka PC
3. Best Ngwaọrụ na Olee otú iji mirror Your Android Gị PC
4.Guide on Olee otú Iji mirror Your Android na ekwentị Mac
1.Why na ndị mmadụ chọrọ mirror ha Android ka PC?
Ihe kacha mma banyere gam akporo igwe ụbọchị ndị a bụ na ha dị ka Obere kọmputa na nke ị nwere ike ịzọpụta nza nke ihe dị ka foto, videos, music na ọbụna gị mkpa akwụkwọ. Ebu a ekwentị bụ nnọọ adaba dị ka nke ọma, na i nwere ụwa dum zukọtara otu ngwaọrụ. Ma, e nwere oge mgbe unu kwesịrị igosi ihe dị mkpa ndị ọzọ na ekwentị gị na mkpa ka ị jikọọ ya na gị na PC, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ndị dị mkpa ọmụma nke ị anakọtara site internet, na chọrọ igosi na gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ ibe. Na ọnọdụ dị otú a mirroring gị Android ka PC na-aghọ n'ezie dị mkpa ka ị na-adịghị ga-mail ma ọ bụ-eziga data onye ọ bụla.
E nwere ọtụtụ ụzọ site na nke i nwere ike yiri Android ka PC dị iche iche ngwa ọdịnala dị maka nzube a ka mma. Ị nwere ike yiri ndị Android ka PC site na iji ma gị WiFi ma ọ bụ gị USB n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ma ụzọ ndị bara uru na nke ọma.
2.1 Mirror Android ka Pc na WiFi
2.1.1 MirrorOp ziri ozi
MirrorOp ziri ozi bụ a ngwaọrụ nke ị nwere ike mfe iji n'ihi mirroring gị Android na gị PC site na iji gị WiFi.
A na ngwa nwere ike ibudata site na Google Playstore site njikọ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awindinc.sphone2tv&hl=en
Olee otú MirrorOp ọrụ:
MirrorOp dị na PlayStore na nwere ike ibudata mfe. Tupu mirroring gị Android na PC, jide n'aka na gị Android na-esite.
Download MirrorOp ziri ozi gị Android.
Download windows version nke ngwa akpọ MirrorOp erite na PC gị na
Jikọọ Android na PC ka a nkịtị WiFi netwọk.
Gbaa ndị MirrorOp ziri ozi ngwa gị PC.
Gbaa ndị MirrorOp erite ngwa gị Android.
Ma ndị ngwaọrụ ga-achọ onye ọ bụla ọzọ na-akpaghị aka.
Ị nwere ike ugbu amalite mirroring.
 Ị nwere ike ịchịkwa gị gam akporo ngwaọrụ site a keyboard na òké.
Miracast bụ ihe ngwa nke na-eji maka mirroring Android na PC site a WiFi njikọ.
Ị nwere ike ibudata Miracast si: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikimediacom.wifidisplayhelper&hl=en
Olee otú Miracast Ọrụ
Mgbe wụnye Miracast si n'elu kwuru banyere njikọ gị na Android ngwaọrụ swipe si nri na họrọ Devices nhọrọ.
Họrọ Project nhọrọ ụdị n'ebe ahụ.
Otu "Tinye a wireless ngosi" nhọrọ ga-egosi na ngwaọrụ gị site na nke ị nwere ike họrọ gị WiFi njikọ.
Site na PC gị, ị nwere ike ịga Ntọala na pịa na Devices taabụ. Site na ịpị "Tinye a ngwaọrụ" nhọrọ, ị nwere ike ịchọ Miracast erite.
Site na ngwaọrụ gị, gaa na Ntọala na n'ebe na ngwaọrụ ngalaba na enweta na Gosiputa. Họrọ Nkedo ihuenyo site n'ebe ahụ.
Họrọ NchNhr bọtịnụ na enweta na Kwado Ikuku Gosiputa. Ngwaọrụ gị ga ugbu a chọọ Miracast ngwaọrụ na-egosipụta ya n'okpuru Nkedo ihuenyo nhọrọ. Enweta na nhọrọ na a ngosi na gị na ihuenyo a na-casted ga-apụta.
Ugbu a, ị nwere ike mfe yiri gị Android na gị PC.
2.2 Mirror Android ka PC na USB
2.2.1 Android-ihuenyo Monitor
N'ihi na mirroring Android ka PC site a USB, ọ bụ n'ezie dị mkpa na ị nwetara Java arụnyere na gị na PC. N'aka nke ọzọ, Mmepụta mode kwesịrị-nyeere na gị android ngwaọrụ maka ịga nke ọma mirroring nke ngwaọrụ.
Ozugbo gị chọrọ bụ ihe zuru ezu, ị nwere ike ibudata Android-ihuenyo Monitor si https://code.google.com/p/android-screen-monitor/
Download na wụnye JRE ma ọ bụ Java Oge ojiri gaa Environment.
Wụnye Android Software Development Kit (SDK) na Associated ngwaọrụ gị PC si Mmemme nchekwa.
Ozugbo ọ arụnyere ọsọ ngwa ma họrọ naanị Android SDK-Platform Ngwaọrụ.
Gaa Ntọala dị na ekwentị gị ma ọ bụ Android ngwaọrụ, họrọ Mmepụta Nhọrọ na n'ebe-aga n'elu ka USB Debugging nhọrọ ma mee ya.
Lee maka ọkwọ ụgbọala metụtara ị Android ngwaọrụ ke Google na ibudata ya n'ime a iche iche nchekwa na gị PC.
Ugbu a, i nwere ike jikọọ na ngwaọrụ gị kọmputa gị site na a USB
Mepee Ngwaọrụ Manager na anya n'ihi na gị android ngwaọrụ.
Ugbu a, ọ bụ oge setịpụrụ ihe ADB ụzọ.
Mepee Properties nke na kọmputa gị na pịa na Advance System Ntọala nhọrọ. Họrọ Environment variables na anya n'ihi na "ụzọ".
Ozugbo hụrụ, pịa ma zọpụta edit ya C: \_ Mmemme faịlụ (x86) \_ Android \_ android-SDK \_ n'elu ikpo okwu-ngwaọrụ \_
Ugbu a, download Android ihuenyo Monitor na wụnye ya na kọmputa gị.
Ugbu a, kọmputa gị na-yiri na gị android.
2.2.2 Droid @ ihuenyo
Droid @ ihuenyo bụ ihe ọzọ na-ewu ewu ngwa nke a na-eji yiri Android ka PC site a USB.
Ịnwere ike ibudata a ngwa si ​​http://droid-at-screen.ribomation.com/?download=127071: Download
Maka iji nke a ngwa, mbụ ị mkpa na Java Run Time Ngwa na PC gị na na wụnye ya.
Ugbu a, ibudata ADB ngwá ọrụ site adịrị ya na gị na desktọọpụ.
Download Droid @ ihuenyo si nyere njikọ na-agba ọsọ ngwa. Ugbu a, pịa ADB na họrọ ADB executable Ụzọ. Họrọ ADB nchekwa nke ị ama amịpụtara ya tupu na pịa OK.
Na gị gam akporo ngwaọrụ, na-emeghe Ntọala na-aga Mmepụta Nhọrọ.
Sapeta Mmepụta Nhọrọ on na họrọ USB Debugging mode n'okpuru ya.
Jikọọ na ngwaọrụ gị gị PC mgbe wụnye niile dị mkpa ọkwọ ụgbọala si internet.
Ngwaọrụ gị e yiri gị PC.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ dị iche iche ngwaọrụ dị na internet nke-enyere gị aka mirroring gị gam akporo ngwaọrụ gị PC, ma ọ bụrụ na ị na-achọ otu nke kasị mma, ọ bụ maa MirrorGo. A na ngwa nwere ike ibudata site http://MirrorGo.wondershare.com/ na bụ nnọọ mfe na ọkachamara ngwọta gị niile mirroring nsogbu. MirrorGo-arụ ọrụ na Windows 7, Windows 8, Windows Vista nakwa dị ka Windows XP. Ọ bụkwa dakọtara na iOS nakwa dị ka Android. MirrorGo-ahapụ gị ijikwa niile ọdịnaya na gị android ngwaọrụ, ma ọ bụ music, ederede ozi, foto, vidiyo ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwa. I nwekwara ike ibudata dị iche iche ọdịnaya site na iji ngwa a.
3.1 Olee otú iji Jikọọ na ngwaọrụ gị na PC Iji MirrorGo:
Tụgharịa na gị WiFi na-eme ka n'aka na ị na ngwaọrụ ma PC na-ejikọrọ na otu njikọ.
Wụnye MirrorGo ngwa faịlụ na gị android ngwaọrụ.
N'out oge, na-agba ọsọ Wondershare MirrorGo na gị usoro.
Gbaa ndị MirrorGo ngwa na ngwaọrụ gị na iṅomi QR koodu site na-ahọpụta OK.
Mgbe gị mobile ga-jikọọ gị PC, gị gam akporo ngwaọrụ ga-egosi na ihe bụ isi window.
3.2 Olee otú iji Jikọọ na ngwaọrụ gị na PC Iji A USB:
Gaa na ntọala nke gị Android ngwaọrụ ma mee nhọrọ nke USB Debug.
Họrọ ego na MTP ọrụ na ngwaọrụ gị.
Wụnye Wodnershare MirrorGo na PC gị.
Jikọọ na ngwaọrụ gị na gị PC site na USB. Gị PC ga-akpaghị aka ịchọpụta ngwaọrụ gị n'ihi nke ngwa arụnyere.
3.3 Ihe i nwere ike ime na gị PC Ejikwa Your Mobile
Ozugbo i yiri gị gam akporo ngwaọrụ gị PC, i nwere ike ime a otutu akpali ihe dị ka:
Ekiri ọkacha mmasị gị videos na nnukwu ihuenyo.
Gosi ọkacha mmasị gị foto gị na ezinụlọ gị na ndị enyi.
Ị pụrụ ịnụ ụtọ a mma ikiri ahụmahụ n'ihi na nke ibu na ihuenyo size.
Ị nwere ike mfe nyefee data n'etiti gị na PC na Android ngwaọrụ.
Ị nwere ike dina egwuregwu na mkpanaka gị na site na gị PC.
Ị nwere ike iji ezigbo oge softwares arụnyere na mkpanaka gị na site na gị PC.
4. Nduzi na Olee otú Iji mirror Your Android na ekwentị Mac
Ya mere, ị anaghị nwere PC ma na-a mpako nwe a Mac. Ọfọn, e nwere ihe na-echegbu onwe unu, ka unu nwere ike mfe yiri gị android ngwaọrụ gị Mac dị ka mma. Dị nnọọ ka mirroring gị na PC na ngwaọrụ nwere ike mere site n'iji dị iche iche dị softwares, mirroring na ngwaọrụ gị MAC mejupụtara ọtụtụ dị iche iche nhọrọ dị ka mma. mgbe mirroring, ị pụrụ ịnụ ụtọ dị iche iche na-akpali akpali ahụmahụ ndị dị ka eji gị Watsapp on a ibu na ihuenyo ma na-akpọ Minecraft na gị Mac.
The Best Ụzọ mirror Your Android ka Mac
E nwere ụzọ dị iche iche site na nke i nwere ike yiri gị gam akporo ngwaọrụ gị Mac. Otú ọ dị, ihe kasị mma nhọrọ nke dị bụ AirDroid. Site n'enyemaka nke AirDroid, ị nwere ike mfe ịchịkwa ngwaọrụ gị site na gị Mac ad nwere ike ịnụ ụtọ dị iche iche na-akpali akpali ahụmahụ.
Wụnye AirDroid na gị usoro site https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=en
Melite gị AirDroid akaụntụ site na-agba ọsọ ngwa.
AirDroid ga ugbu a na-ajụ gị maka eme ya ọrụ. Enweta na Kwado na-eme otú ahụ. A Pop elu ga-egosi ugbu a, dị nnọọ enweta na OK maka ọrụ ahụ.
Kwado ndị Chọta My ekwentị ọrụ site n'iji ya gee ntị ya na tapping na Rụọ ọrụ nhọrọ.
Ọzọ Android ọnọdụ menu ga-apụta na ngwaọrụ gị. Enweta na Mee ọ rụọ ọrụ na gị Mac na ngwaọrụ ga a na-dakọtara na onye ọ bụla ọzọ.
Ugbu a wụnye AirDroid ngwa gị Mac na-agba ọsọ echichi usoro. Ẹkedori faịlụ mgbe echichi zuru ezu.
Itinye otu nbanye na paswọọdụ nke ị mere na gị AirDroid ngwa na ngwaọrụ gị.
Ugbu a, i nwere ike na-agba ọsọ na faịlụ na ngwaọrụ gị mfe na kọmputa gị.
Top 10 Akụkụ Gị Mkpa Maara Banyere Mac OS X El Capitan
> Resource> Mac> Full Nduzi na Mirroring Your Android Gị PC / Mac